Google Home uye Mini Mini inosvika kuSpain gore rese, seAmazon Echo | Ndinobva mac
Dzimwe nguva Apple inoratidza kushomeka kwekufarira kana kutsvedza kwatisingakwanise kunzwisisa. Nyaya ichangoburwa uye yakanyanya kurova inowanikwa muPodPod, mutauri uyo asingatsanangurike seakangwara asi kuti vese vashandisi vanoda kuti uve. Chikonzero chikuru chinoita sechinhu chatinoziva tese: Siri achiri akasvibira kwazvo.
Siri akaunzwa zviri pamutemo neiyo iPhone 4s, anopfuura makore mashanu apfuura, asi kubva zvino shanduko yemubatsiri weApple yanga iri shoma, zvisinei nezvipikirwa izvo Apple gore negore kuWWDC. Kubva izvozvi, ma "greats" akasara anga aine nguva yekugadzira nekumisikidza avo vamene vabatsiri, vabatsiri avo, kazhinji, vanopa Siri chiuru kutendeuka.
Kuregeredza kwechikamu cheApple naSiri, kwakonzera chimwe chinhu icho vashandisi vazhinji vasina kufunga uye ndezvekuti zvese Google neAmazon vanogona kuvhura maspika avo akanaka mune mimwe misika isingataure Chirungu pamberi peApple. Mazuva mashoma apfuura, La Vanguardia yakaburitsa chinyorwa umo matinoverenga kuti kuvhurwa kweAmazon Echo, mumhando dzakasiyana, muSpain kwaive padhuze kwazvo.
Nhasi tinomuka nenhau dzatinogona kuverenga muVentureBeat, kwavanotaura izvozvo Google ichavhura Imba yeGoogle uye neGoogle Home Mini muSpain, Mexico, Denmark, Norway, South Korea neSweden mugore rese rino, nekudaro kuwedzera huwandu hwenyika dzainowanikwa. Munguva yeGoogle I / O yakaitwa nezuro, Google yakazivisa nyowani nyowani mumubatsiri wayo, pamusoro pekuwedzera mitauro mitsva nemanzwi matsva.
Huwandu hwenyika uko HomePod inowanikwa parizvino inogumira ku3: United States, United Kingdom neAustralia. Hatizive kana panguva yeWWDC ichaitwa kutanga kwaJune, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani ichazivisa kuwanikwa kwemutauri wayo kune dzimwe nyika, uye nekudaro inokwanisa kugutsa vashandisi vanoda kunakidzwa nemutauri akangwara, izvozvi vese maAmazon neGoogle vakasimbisa kuwedzera kwavo kwepasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Google Imba uye Imba Mini inosvika kuSpain gore rese, seAmazon Echo